रोनाल्डो पूर्व क्लब युनाइटेड फर्केलान्? | Hamro Khelkud
रोनाल्डो पूर्व क्लब युनाइटेड फर्केलान्?
म्याड्रिड (एजेन्सी)– क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहि समरमा पूर्व क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड फर्कन इच्छुक रहेको चर्चा सुरु भएको छ । रियल म्याड्रिडका फरवार्ड रोनाल्डोले स्पेन छोड्न चाहेको यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । युनाइेडप्रति उनी भावनात्मक रुपमा नजिक भएकाले पनि उनी पुरानै क्लबमा फर्कने सम्भवना बढी रहेको बताइएको छ ।
युनाइडेले सन् २००९ मा रोनाल्डोलाई ८० मिलियन पाउन्डमा रियललाई बचेको थियो । बीचमा एकपटक युनाइटेडले रोनाल्डोलाई फर्काउने प्रयास पनि गरेको थियो । तर, त्यो समय उनी रियलमै रहन चाहेकोले सरुवाको चर्चा सेलाएको थियो ।
रोनाल्डोका सल्लाहकारले पनि उनलाई स्पेन बाहिरको क्लबमा जान उपयुक्त हुने सल्लाह दिएका बताइएको छ ।१३ मिलियन पाउन्ड कर छली गरेको भन्ने मुद्दा खेपिरहेका कारण र त्यसमा क्लबले कम चासो दिएकाले पनि रोनाल्डो रियलसँग खुसी नरहेको बताइएको छ । यद्दपी, रोनाल्डालाई किन्न विश्वका थोरै क्लबमात्र सक्षम छन् ।
पेरिस सेन्ट जर्मेन पनि उनीसँग लामो सम्झौताका लागि इच्छुक देखिएको छ । एसी मिलानका नयाँ चिनियाँ मालिकले रोनाल्डोका एजेन्ट जर्ज मेन्डेससँगको सम्पर्कमा रहेको बताइएको छ । चीन पनि रोनाल्डोका लागि एउटा विकल्प हुन सक्छ , जहाँ मिड सिजनको सरुवा बजार आज सुरु हुँदैछ । तर, ३२ बर्षे सुपरस्टार युरोपकै कुनै क्लबमा बढी इच्छुक रहने विश्वास गरिएको छ ।
यी सब चर्चाका बीच पनि रियलले रोनाल्डोलाई क्लबमै राख्नका लागि सबै खाले प्रयास गर्नेछ । यद्दपी उनलाई छोड्न क्लब तयार भएमा युनाइटेड त्यस्तो एउटा क्लब हो जहाँ रोनाल्डो जान चाहन्छन् ।